Onye nnọchi anya Spanish na Jamaica gara leta Minista na-ahụ Maka Njem Nleta na Jamaica
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Jamaica » Onye nnọchi anya Spanish na Jamaica gara leta Minista na-ahụ Maka Njem Nleta na Jamaica
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • investments • Akụkọ gbasara Jamaica • News • Iwughachi • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Onye nnọchi anya gọọmentị Spain na Jamaica, Onye Ọkachamara Diego Bermejo Romero de Terreros (lee aka ekpe dị na mbiet ahụ) gara leta Minista nke njem nleta na Jamaica, Hon. Edmund Bartlett, Eprel 14, 2021.
N’etiti oke mgbasa ọrịa COVID-19, ndị isi abụọ ahụ gbakọtara iji kwurịta ọnọdụ dị na Jamaica na Spain.
A tụlere usoro iji kwalite njikọ dị n'etiti obodo abụọ ahụ ma bawanye itinye ego na ọzụzụ.
Onye minista na-ahụ maka njem nleta na Jamaica bụ Bartlett na-arụsi ọrụ ike iji wughachi njem na mba nke ya ma na-enyekwara mba ndị ọzọ aka.
N'oge nzukọ ha, ha nwere mkparịta ụka n'ozuzu ha banyere ọnọdụ nke njem njem nleta na mbuso oria COVID-19.
Ha kwukwara banyere ime ka mmekọrịta dị n'etiti mba dị iche iche dịka itinye ego, ọzụzụ, na ihe owuwu. Nzukọ ahụ mere na ụlọ ọrụ Minista Bartlett na New Kingston.